सिल्लल्ट विशेषज्ञले तपाइँलाई Regex scraper को बारे मा ठेगाना हुनु पर्छ कि मूल कुरा को निर्दिष्ट गर्दछ
नियमित नियमित अभिव्यक्ति वा रजिक्स क्यारेक्टरको अनुक्रम हो जुन डाटामा खोजी गर्न प्रयोग गरिन्छ। जाली. यसले प्रोग्रामरहरू र विकासकर्ताहरू उपयोगी सामग्री पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ. 1980 देखि, नियमित अभिव्यक्तिहरू कोडहरू लेखनका लागि प्रयोग गरिन्छ. तिनीहरू पाठ सम्पादकहरू र शब्द प्रोसेसरहरूको पढ्न मिल्ने र स्केलेबल डेटासँग प्रतिस्थापन गर्दछ. सी ++, पाइजोन, जाभास्क्रिप्ट र अन्य प्रोग्रामिङ भाषाहरू रेजेक्स-आधारित पुस्तकालयहरू प्रदान गर्दछ र तपाईंको काम कम गर्दछ - tappeto bicolore rosso.
नियमित अभिव्यक्तिहरूको साथमा अनुप्रयोगहरू बनाउनुहोस्:
नियमित अभिव्यक्ति वा रिजेक्ससँग विभिन्न अनुप्रयोगहरू विकास गरिएका छन्।. PowerGREP को साथ, हामी हाम्रो कम्प्युटरमा फोल्डरहरू र फाइलहरू खोज्न सक्दछौं, डेटा सम्पादन गर्न र विभिन्न स्रोतहरूबाट जानकारी सङ्कलन गर्दछौं. PowerGREP नियमित अभिव्यक्ति इन्जिन मोती संग मिल्दो छ,. नेट र जाभा फ्रेमवर्कहरू र प्रोग्रामरहरू, वेबमास्टरहरू, र अनुप्रयोग विकासकर्ताहरूको लागि उपयोगी छ. यदि तपाइँ डेस्कटप अनुप्रयोग वा मोबाईल विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ नियमित अभिव्यक्तिको साथ धेरै समय र ऊर्जा बचत गर्न सक्नुहुनेछ. एप विकसित गर्नका लागि तपाईंले भर्खरै कोडहरू सम्मिलित गर्न आवश्यक छ. RegexBuddy र EditPad प्रो नियमित रूपमा अभिव्यक्तिको साथ निर्मित दुई व्यापक अनुप्रयोगहरू हुन्.
गैर-प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त:
नियमित अभिव्यक्तिको एक प्रमुख फाइदा भनेको हो कि तिनीहरू गैर-कोडकर्ता र गैर-प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छन्. नियमित अभिव्यक्तिको साथ, तपाईंलाई कठिनाई कोडहरू सिक्न वा उन्नत प्रोग्रामिंग कुञ्जीहरू प्राप्त गर्न आवश्यक छैन. तपाईको काम पूरा गर्न तपाईलाई केवल फेथोन, सुन्दरस्प, जाभास्क्रिप्ट र रेजेक्सको आधारभूत ज्ञानको आवश्यकता पर्दछ. यो फ्रीलान्सरहरू र वेबमास्टर्सहरूको लागि राम्रो छ जसले उन्नत कोडिङ वा प्रोग्रामिङ क्षमताहरू छैन.
एक रिसेक्स प्याटर्नले लक्ष्य स्ट्रिङसँग मेल खान्छ. यो ढाँचा परमाणुको अनुक्रमबाट बनाइएको छ. एक परमाणु रिजक्स ढाँचामा एकल बिन्दु हो जसले स्ट्रिंगलाई राम्रो तरिकामा लक्ष्य गर्दछ. उनीहरूको शाब्दिक अर्थ र अनुप्रयोगहरूमा आधारित चारौं भन्दा बढी रेक्स क्यारेक्टरहरू छन्.
XPath - तपाईंको लागि एक शक्तिशाली उपकरण:
XPath सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा उपयोगी हो (2 9) सामाग्री स्क्रैपर एस र डेटा निकाटर. यसले विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट डेटा ढाँचाहरू सङ्कलन गर्दछ, तारहरू सिर्जना गर्दछ र पढ्न योग्य र स्केलेबल ढाँचामा डेटा व्यवस्थापन गर्दछ. XPath पहिल्यै वेबसाइटको पाठलाई पहिचान गर्दछ, यसको गुणस्तर विश्लेषण र तपाईंको लागि गुणस्तर सामग्री स्क्रैप गर्दछ. यो पार्स इन्जिन र वेब क्रलरले विस्तृत रेजिक्स अनुप्रयोगहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै ब्याक सन्दर्भ, POSIX क्यारेक्टर र प्रतिस्थापन.
Regex को एक लाइन कोड को 100 लाइनों को बदलन सक्छ:
रेजेक्स को एक एकल लाइन वेब पृष्ठ देखि कोड को 100 लाइनहरु लाई बदलन को लागि पर्याप्त छ. यसको मतलब तपाईंले आफ्नो काम पूरा गर्न परिष्कृत प्रोग्रामिङ कोडहरू सिक्न आवश्यक छैन. नियमित अभिव्यक्तिको साथ, यो विभिन्न वेबसाइटहरूबाट स्क्रैप डेटा को लागि सजिलो छ र डेटा ढाँचाहरू र तारहरू सिर्जना गर्दछ।.
यसको आकस्मिक शक्ति र पढ्नको लागि सजिलै संग जावा, पाइजोन, जाभास्क्रिप्ट, रूबी, क्यूटी, एक्सएमएल स्कीमा जस्ता विभिन्न अभिव्यक्ति भाषाहरू र उपयोगिताहरूको विकल्प छ।. नेट ढाँचा. पर्ल 5. 10 पाइन्टन र PCRE दुवै मा रचनात्मक एक्स्टेन्सन लागू गर्दछ. विभिन्न प्रणाली प्रशासकहरूले रेक्स-आधारित प्रश्नहरू प्रश्नहरू चलाउन बाध्य गर्न बाध्य छन् किनभने खोज इन्जिनहरूले सार्वजनिक रूपमा रजिक्स समर्थन प्रदान गर्दैनन्।.
नियमित अभिव्यक्तिहरू पहिचान गर्नका लागि एक बहुमूल्य उपकरण हुन् र वेब सामग्री स्क्रैपिंग गर्दै छन्. तिनीहरू एक उत्कृष्ट प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्छन् र प्रोफेसर र गैर-पेशेवर दुवैको लागि उपयुक्त छन्.